समाचार वाचिकाले समाचार भन्दाभन्दै पेन्टी देखाएपछि…… – Fewa Times
समाचार वाचिकाले समाचार भन्दाभन्दै पेन्टी देखाएपछि……
प्रकाशित मिति: January 3, 2017 12:18 pm
इटालीकी एक समाचारवाचिकाले समाचार वाचन गरिरहेकै बेला आफ्नो भित्री वस्त्र देखाएकी छिन् । उनले देखाएको भित्री वस्त्र पेन्टी हो । यद्यपि उनले जानाजानी पेन्टी देखाएकी होइनन् ।
इटालियन टेलिभिजन च्यानल टीजी फाइभमा रात्रीकालीन समाचार बुलेटिन प्रस्तुत गरिरहेकी समाचार वाचिका कोस्टान्जा कालाब्रिजले भित्री वस्त्र देखाएकी हुन् । लाइभ समाचार वाचन गरिरहेको बेलामा उनी आफैँ समाचारको विषय बनिन् जुन उनी र उनको करियरका लागि अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो । लाइभ समाचार देखाउँदै गर्दा दर्शकलै उनको भित्री वस्त्र नै लाइभ देखे । उनले छोटो स्कर्ट लगाएकी थिइन् । गोडा फट्याउँदा उनको पेन्टी देखिएको हो ।
डेस्कमुनि गोडा रहेका कारण दर्शकले आफ्नो कम्मरमुनिका दृश्य देख्दैनन् भन्ने उनको सोचाइ थियो । तर, गोडा फट्याउँदा उनले उक्त डेस्क सिसाको पारदर्शी डेस्क हो भन्ने ख्याल गरिनन् । ३८ वर्षीया यी सुन्दरीले समाचार वाचन गर्दा सुरुमा उनको अनुहारमा क्यामरा जुम गरिएको थियो । तर विस्तारै क्यामरा जुम आउट हुँदै पूरै समाचार डेस्क देखायो । त्यसक्रममा गोडा फट्याएर बसेकी उनको स्कर्टले छोप्न नसकेको भित्री वस्त्र छ्यांगै देखियो ।
सपनामा संम्भोग गरेको देखेमा के हुन्छ ? जानी राखौँ…
साबधान ! यी कुराहरु भुलेर पनि कसैलाई नभन्नुहोस्
के तपाईको यस्ता कुरा छन् ? छ भने तुरुन्तै डिलिट गरिहाल्नुस्…
किन अशुभ मानिन्छ बिरालोले बाटो काट्दा ? यस्तो पो रहेछ कारण…